Soomaaliya, 23 May 2019
Khamiis 23 May 2019
Nin isku qarxin rabay xafladda Ahlu-Sunna oo la qabtay
Ciidamada amniga degmada Guriceel ayaa ka hortagay qof doonayay inuu isku qarxiyo munaasabad ka socotay meel fagaaro ah oo ku taalla degmadaasi, taasi oo ay qabanayeen Ahlu-Sunna.
Imtixaanka ardayda Puntland oo lasoo geba-gebeeyey
Deeggaanada Puntland ayaa waxaa maanta lagu soo gaba-gabeeyay imtixaanka ardayda dugsiyada dhexe iyo sare ee maamulkaas.
Bandhigga VOA: Samafalka xilliga bisha Ramadan
Barnaamijka Bandhigga VOA, waxu uu toddobaadkan ku saabsan yahay howlaha samafalka ee xilliga bisha Ramadan. Waxaa soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Wareysi Gaar ah: M. Ku-xigeenka Jubaland
Maxamuud Sayid Aadan, Madaxweyne Kuxigeenka Jubaland ayaa wareysigan dheer kaga hadlaya arrimo ay ku jiraan darbiga ay Kenya ka dhisayso xadka ay la leedahay Somalia iyo khilaafka u dhexeeya maamulkiisa iyo dawladda federaalka.
Ugu yaraan shan qof ayaa ku geeriyootay 10 kalena way ku dhaawacmeen qarax babauur oo maanta ka dhacay bar kontorool oo ku taalla agagaarka taallada Daljirka ee magaalada Muqdisho.
Dhaqanka Iyo Hiddaha, qeybta 472-aad
Guterres: Horumarka Soomaaliya halis ayuu wajahayaa
António Guterres ayaa ka digay in xagjirnimada, colaadda, musuqmaasuq iyo xasillooni-darrada siyaasadeed ay halis ku yihiin horumarka ay Soomaaliya ay ka sameyneyso dhanka dowladnimada.
Mas'uuliyiin loo diiday Visa-ha Kenya oo Xamar ku laabtay
Saddex mas’uul oo ka tirsan hay’adaha dawladda Soomaaliya kuwaasi oo dawladda Kenya u diidday inay galaan Nairobi ayaa maanta kusoo laabtay Muqdisho.
Galka Baarista: Fashilka ku yimid imtixaanka dugsiyada sare